Madaxtooyada Somaliya oo beenisay inuu jiro shir ay la galeen maamulka Somaliland - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweynaha Somaliya ayaan la sheegin inuu wefti u direy kulan ay qabanqaabinaayaan maamulka Somaliland iyo shirkado taabacsan oo ka dhacaya Nayroobi. Waan ku faraxsan inaan la kulano dawlada dhexe ayaa yiri wakiilka maamulka ee Muuse Biixi u jooga Nayroobi.
Madaxtooyada Somaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantey wararka sheegaya inay maamulkaas kula kulmayaan Nayroobi. Shirka ka dhacaya Nayroobi ayuu u dhexerya maamulka Somaliland iyo hay’ad buga oo ay balansadeen.
Dawlada Somaliya ayaa sheegtay in ay ka go’an tahay sidii dalka loogu soo dabaali lahaa xasilooni siyaasadeed laakiin ay sumcad xumo u egtahay in shir noocana loo qabto.
Kulankan uu dalbadey Muuse Biixi ayaa waxa dabada ka riixaya oo qasbaya dawlada daneeya siyaasada maamulka Somaliland. Waxa kulankan diyaariyay koox la baxay wada xaajoodka mana matali karaan masayrka gobolada Woqooyi.